PaySketch: Falanqaynta PayPal iyo Warbixinta | Martech Zone
Waxaan leenahay saaxiibo ka tirsan warshadaha u adeegsada PayPal dhammaan macaamiladooda. Albaabbada lacag-bixinta iyo kuwa wax-soo-saarayaashu waxay ku daraan xoogaa lacag ah xawaaladaha, sidaas darteed PayPal waa qaab fudud oo lagu kalsoon yahay si aad ugu ururiso khidmadaha rukumanka, soo degsashada, iyo lacagaha kale. Taasi waxay tiri, isdhaafsiga 'PayPal' ma ahan midka ugu fudud ee la maro - marka helitaanka qalab sirdoon ganacsi oo kaa caawin kara inaad kormeerto, falanqeyso, ururiso oo aad la macaamisho macaamiishaada ayaa ku siin kara faa iido weyn.
Mushahar bixinta waxay ku siisaa codsi miisaanka sirdoonka ganacsiga la awoodi karo oo kaa caawinaya inaad maamusho oo aad kormeerto meheraddaada halkii aad ka heli lahayd is-dhexgalka 'PayPal' oo runtii kaliya siiya aragti ku saabsan macaamillada. PaySketch waxay bixisaa aragti guud ee koontadaada iyo sidoo kale dashboorro gaar ah oo loogu talagalay macaamilada, iibka, lacag bixinta, macaamiisha, alaabada iyo warbixinta.
Waxaa jira saddex waxtar oo muhiim u ah PaySketch:
Analytics - PaySketch waxay bixisaa waqtiga dhabta ah Falanqaynta 'PayPal Analytics' oo leh aragtiyo, saadaallo iyo falanqeyn isbeddel ah oo kaa caawineysa inaad kormeerto oo aad horumariso ganacsigaaga.
Warbixinta - Sifee, raadi, arag oo soo deji macaamilka PayPal isla markiiba. Arag oo hoos u dhig warbixinnada iibka, alaabada iyo / ama macaamiisha.
Maareynta Xisaabaadka - La soco macaamil ganacsi, fiiri baaqigaaga koontada, soo celinta nidaamka iyo dir lacag.
Soo Koobida PayPal
Tags: macaamiisha paypalmuraayada paypallacag bixinta paypalalaabada paypalwarbixinta paypalwarbixinnada paypaliibinta paypalisdhaafsiga paypalwarqad lacag bixin ah
Sep 7, 2014 at 3: 13 PM
Waad ku mahadsantahay tilmaamaha Douglas. Paysketch wuxuu umuuqdaa mid runtii waxtar leh oo xiiso leh. Waxaan siin doonaa isku day.